Golaha Aqalka Sare oo ka fekeraya shaqadiisa Kulanka 1-aad ee Golaha – Kalfadhi
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku hawlan dardar-gelinta Kulamada Golaha ee Kalfadhigiisa 5-aad. Xeerar ay ka mid yihiin Hindise Sharciyeedka Xaqsiinta Ciidanka iyo kan Mihnadlayaasha Caafimaadka ayuu Guddiga Joogtada ee Goluhu ka dooday shalay sidii loogu kala hormarin lahaa Kulamada Golaha ee ugu soo horeeya.
Labada Hindise Sharciyeed ee uu Aqalka Sare ka doodi doono waa kuwii uu Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, sheegay in ay yihiin haraaga hindisayaal todobo ahaa oo ay shan ka mid ah horay u meel mariyeen. Guddiga Joogtada ee Golaha wali ma aysan muddeyn waqtiga Kulankooda 1-aad, laakiin waxaa la filayaa inuu noqdo todobaadkan.
Reysal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kowdii bishan, isagoo ka qudbeynayey Xafladdii Furitaanka Kalfadhiga 5-aad ee Aqalka Sare, waxa uu sheegay inuu ka codsanayo Aqalka Sare inuu meel mariyo 29 Hindise Sharciyeed oo uu sheegay iney Golaha ag yaalaan. Laakiin, taas waxaa iska diiday Aqalka Sare oo sheegay in ay Golaha Shacabka ka soo gaartay 7 Hindise oo kaliya, 5 ka mid ahna ay ansixiyeen.
Afhayeennada golayaasha sharci-dejinta federaalka iyo dowlad-goboleedyada oo maanta Garowe tegaya